सलाम छ ! भगवान जस्तै श्रीमान ! सबैले आस मा’रेकी श्रीमतीलाई यसरी ब’चाए, (भिडियो) « गोर्खाली खबर डटकम
फेरि एक साता लम्ब्याइयो निषेधाज्ञा, के के खुल्ने र के के बन्द हुन्छन् ? यस्तो छ सरकारको निर्णय ! हेर्नुहोस्
१८ बर्षेकी युवतीको रहस्यमय मृत्यु, आफ्नै मिल्ने साथीले खोलिन यस्तो ड रलाग्दो रहस्य, यस्तो सम्म भनेकी रहेछिन (भिडियो सहित)
दुई साथीहरूसँगै प;रीक्षा दिन जाँ;दै गरेकी २८ वर्षीया यी यु;वतीको जी;वनमा घ;ट्यो प;त्या;उने न;सकीने ड;रला;ग्दो घ;टना;
काठमाडौंमै भेटियो खोप लगाएकी संगिताको शरीरमा पनि चम्चा थाल टाँसिन थालेपछी डाक्टरै नै परे चकित
नेपालको बजारमा सूनको मूल्यमा भारी गिरावट, जानकारी लिनुहोस आजको बजार मूल्य विवरण
सलाम छ ! भगवान जस्तै श्रीमान ! सबैले आस मा’रेकी श्रीमतीलाई यसरी ब’चाए, (भिडियो)
काठमाण्डौ। निकै भलादमी देखिने पुरुषहरू पनि घरमा श्रीमती र छोराछोरी हुदाँहुँदै बाहिरी सम्बन्धमा रहने, श्रीमती र छोराछोरीलाई दुःख दिने, कुटपिट गर्ने, यातना दिने गरेका घटना आजभोली दिनहुँ जसो बाहिर आइरहेका छन् । यद्यपि बाहिर आएका घ’टना एकाध मात्रै हुन् । दोब्बर, तेब्बर घटना भित्रभित्रै लुकाइन्छन् । इज्जतको डरले बाहिर ल्याइदैनन् । तर गुल्मी धुरकोट, पिपलधार घर भएका विनोद खड्का भने एउटा यस्ता उदाहरणीय श्रीमान् हुन्,
जसले श्रीमान् हुनुको महत्व र कर्तव्य दुवै कुरा प्रमाणित गर्दैछन् । विवाहको मण्डपमा अग्नीलाई साक्षी राखी, सात फेरा घुमेर, सात जन्म संगै हुन गरेको कबुल अनुसार निर्देशित छन् । उनलाई देख्ने जो कोहीले भन्छन्, ‘श्रीमान् हुन् त यस्तो ।’ २०७२ सालको बैशाख २४ गते विनोद र अनिता वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिए । त्यो मागी विवाह थियो । विनोद अहिले २७ वर्षका भ एभने अनिता २४ वर्षकी । उनीहरूको वैवाहिक जीवन राम्रोसंग चलिरहेको थियो । हाँसी खुसी थिए । विहेको २ वर्षपछि छोरी आहानाको आगमनले उनीहरूको खुसी झन् बढ्यो ।
सायद विनोद र अनिताको सुखद् जीवन दैवलाई रुचेन । अनितालाई एक्कासी टाउको दुख्ने रोगले सताउन थाल्यो । उनीहरूले चेकअप गराए । चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम औषधि खान थालिन् अनिता । औषधिले सायद काम गरेन । उनलाई ब्रेन हेमरेज भयो । त्यो घटनाले विनोदले सारा खुशी र सपना ऐना फुटेसरह टुक्राटुक्रामा परिणत भएको महसुस गरे । तर पनि श्रीमतीलाई जसरी पनि बचाउने अभियानमा लागे । श्रीमती बिनाको जीवन अधुरो सोचिसकेका उनले पैंसा, समय, हेरचाह जे–जे आवश्यक पर्छ, सबै जोहो गर्ने अठोट गरे । र लागे राम्रो भन्दा राम्रो उपचारको खोजीमा ।
दीपक मनाङ्गे भन्छन्-‘मैले ठिक समयमा ओलीलाई छाडे र बचे, उनको फ्युचर छैन’ (भिडियो)
‘खोप लगाएपछि मेरो शरीर चुम्बक बन्यो, फलामका सबै चिज टाँसिन्छन्’ (भिडियो)
अफिस जान्छु भनेर हिँडे’का पतिले पत्निलाई दिए यति ठूलो धो’का(भिडियो’सहित)
नेपालमा फेरि अर्को घट’ना, प्रेमिकाले बोलाएर गएका युवा जंगलमा यस्तो ड’रलाग्दो अव’स्थामा भेटिए (भिडियो)
१८ बर्षकी छोरीको होस्टेल बाहिर रहस्यमय मृ*त्यु भएपछी बुवाको गम्भीर खुलासा (भिडियो)
काठमाण्डौमा थप एक हप्ता थपिँदै निषेधाज्ञा : के खोल्न पाईने के खोल्न नपाईने बिबरण सहित
यसरी आक्रमण गरिएको रहेछ, ज्ञानेन्द्र शाहीले सार्वजनिक गरे गोप्य भिडियो ? (भिडियो सहित)
के साँच्चै जलपरी हुन्छन् समुद्र किनारमा ?